နောက်ကျောနဲ့ ခါးဘေးတဝိုက်က အဆီတွေကျဖို့အတွက် - Lifestyle Myanmar
Home Fitness နောက်ကျောနဲ့ ခါးဘေးတဝိုက်က အဆီတွေကျဖို့အတွက်
နောက်ကျောနဲ့ ခါးဘေးတဝိုက်က အဆီတွေကျဖို့အတွက်
ပျိုမေတို့မှန်ကြည့်တဲ့အခါတိုင်း ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကျောဖက်ကို ဘယ်နှစ်ခါလောက်ပြန်ကြည့်မိလဲ။ လူအတော်များများကတော့ ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကျောဖက်ထက် ရှေ့ဖက်ကို ပိုပြီးဂရုစိုက်တတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ကျောနဲ့ဘေးဖက်မှာ အဆီပိုတွေရှိနေရင် ခန္ဓာကိုယ်က အနည်းငယ်ကြည့်ရဆိုးစေပါတယ်။ ဒီလိုနောက်ကျောနဲ့ဘေးဖက်က မလိုချင်တဲ့အဆီပိုတွေကို ကျစေဖို့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်း ၇ ခုကိုပျိုမေတို့အတွက် မျှဝေပေးမယ်နော်။
၁။ Foeward bends
ခန္ဓာကိုယ်ကို တည့်တည့်ရပ်ပြီးတော့ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို အနည်းငယ်ချဲထားပါ။ ပြီးရင် ဒူးကိုမကွေးပဲနဲ့ ကြမ်းပြင်ကိုလက်ထောက်လို့ရတဲ့အထိ ခါးကိုကိုင်းညွှတ်ပေးပါ။ ၁၅ကြိမ်လောက်ကို ၂ကျော့ ၃ကျော့ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၂။ Sideways bends.
ခန္ဓာကိုယ်ကို မတ်မတ်ရပ်ပြီးတော့ ခြေနှစ်ချောင်းကို ပခုံးရဲ့အကျယ်အတိုင်း ချဲထားပေးပါ။ ပြီးရင် ပုံထဲကအတိုင်း ဘေးဖက်ကို တစ်လှည့်စီကိုင်းညွှတ်ပေးပါ။ အလေးတုံးကိုကိုင်ပြီး ဆော့ကစားရင် ပိုမိုထိရောက်ပါတယ်။ ၁၅-၂၀ ကြိမ်လောက်ကို ၂ကျော့ ၃ကျော့လောက် ပြုလုပ်ပေးပါ။
ဒိုက်ထိုးတဲ့ပုံစံအတိုင်း လက်ကိုခန္ဓာကိုယ်အလယ်လောက်မှာ ထောက်ထားပြီး ပခုံးအကျယ်အတိုင်းရှိပါစေ။ ထို့နောက်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖြည့်ညင်းစွာနှိမ့်ချပြီး နဂိုပုံစံအတိုင်း ဖြည်ညင်းစွာပြန်ထပါ။ ထိုနည်းအတိုင်း အကြိမ် ၂၀-၃၀ ကို ၂-၃ ကျော့လောက်ပြုလုပ်ပေးပါ။
၄။ Bow position.
ပုံအတိုင်းကြမ်းပြင်မှာ ဝမ်းလျှားမှောက်အနေအထားးနဲ့ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆွဲထားပြီး လေးကိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါစေ။ ခေါင်းကိုတည့်မတ်စွာထားဖို့ လိုပါတယ်။
ပြီးလျှင်အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှုပြီး ထိုနည်းအတိုင်း စက္ကန့် ၂၀ ကနေ ၆၀ အထိနေပေးပါ။
၅။ Superman position.
ကြမ်းပြင်မှာ ဝမ်းလျားမှောက်အနေအထားနဲ့ လက်တွေကိုအရှေ့ဖက်သို့ ဆန့်ထုတ်ထားပေးပါ။ ပြီးလျှင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပေါ်သို့ရသလောက်ကိုင်းညွှတ်ပြီး နဂိုပုံစံအတိုင်း ပြန်နေပါ။ အကြိမ် ၂၀- ၃၀ ကို ၃-၄ ကျော့ပြုလုပ်ပေးပါ။
၆။ Upper back lifts.
ယခုလေ့ကျင့်ခန်းကို ပြုလုပ်ဖို့အတွက် ဟန်ချက်ထိန်းတဲ့ဘောလုံးလိုအပ်ပါတယ်။ ပုံထဲကအနေအထားနဲ့ ခေါင်းကိုမတ်မတ်ထားပြီး ခါးကိုအပေါ်သို့ ကိုင်းညွတ်ရုံပါပဲ။ ၁၂-၁၅ကြိမ်ကို ၁ကျော့၂ ကျော့လောက်ပြုလုပ်ပေးပါ။
၇။ Backward bends.
ယခုလေ့ကျင့်ခန်းကို စတင်ဖို့အတွက် ယခင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို အနည်းဆုံးနှစ်ပတ်လောက်ပြုလုပ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ကြမ်းပြင်မှာ ဒူးထောင်လျှက်အနေအထားနဲ့ ပက်လက်အနေအထားအတိုင်းနေပြီး လက်နှစ်ဖက်ကိုအနောက်သို့ ထောက်ထားပါ။ ပြီးလျှင် ဒူကိုမကွေးစေပဲ ခါးကိုအပေါ်သို့မြှင့်တင်ပါ. ယခုပုံအတိုင်း ၃-၅စက္ကန်လောက် နေပေးပါ။
ပြိုမတေို့မှနျကွညျ့တဲ့အခါတိုငျး ကိုယျ့ရဲ့နောကျကြောဖကျကို ဘယျနှဈခါလောကျပွနျကွညျ့မိလဲ။ လူအတျောမြားမြားကတော့ ကိုယျ့ရဲ့နောကျကြောဖကျထကျ ရှဖေ့ကျကို ပိုပွီးဂရုစိုကျတတျကွတယျ။ ဒါပမေယျ့ နောကျကြောနဲ့ဘေးဖကျမှာ အဆီပိုတှရှေိနရေငျ ခန်ဓာကိုယျက အနညျးငယျကွညျ့ရဆိုးစပေါတယျ။ ဒီလိုနောကျကြောနဲ့ဘေးဖကျက မလိုခငျြတဲ့အဆီပိုတှကေို ကစြဖေို့အတှကျ လကေ့ငျြ့ခနျး ၇ ခုကိုပြိုမတေို့အတှကျ မြှဝပေေးမယျနျော။
၁။ Forward bends
ခန်ဓာကိုယျကို တညျ့တညျ့ရပျပွီးတော့ ခွထေောကျနှဈခြောငျးကို အနညျးငယျခြဲထားပါ။ ပွီးရငျ ဒူးကိုမကှေးပဲနဲ့ ကွမျးပွငျကိုလကျထောကျလို့ရတဲ့အထိ ခါးကိုကိုငျးညှတျပေးပါ။ ၁၅ကွိမျလောကျကို ၂ကြော့ ၃ကြော့ ပွုလုပျပေးနိုငျပါတယျ။
ခန်ဓာကိုယျကို မတျမတျရပျပွီးတော့ ခွနှေဈခြောငျးကို ပခုံးရဲ့အကယျြအတိုငျး ခြဲထားပေးပါ။ ပွီးရငျ ပုံထဲကအတိုငျး ဘေးဖကျကို တဈလှညျ့စီကိုငျးညှတျပေးပါ။ အလေးတုံးကိုကိုငျပွီး ဆော့ကစားရငျ ပိုမိုထိရောကျပါတယျ။ ၁၅-၂၀ ကွိမျလောကျကို ၂ကြော့ ၃ကြော့လောကျ ပွုလုပျပေးပါ။
ဒိုကျထိုးတဲ့ပုံစံအတိုငျး လကျကိုခန်ဓာကိုယျအလယျလောကျမှာ ထောကျထားပွီး ပခုံးအကယျြအတိုငျးရှိပါစေ။ ထို့နောကျခန်ဓာကိုယျကို ဖွညျ့ညငျးစှာနှိမျ့ခပြွီးနဂိုပုံစံအတိုငျး ဖွညျညငျးစှာပွနျထပါ။ ထိုနညျးအတိုငျး အကွိမျ ၂၀-၃၀ ကို ၂-၃ ကြော့လောကျပွုလုပျပေးပါ။
ပုံအတိုငျးကွမျးပွငျမှာ ဝမျးလြှားမှောကျအနအေထားးနဲ့ ခွထေောကျနှဈဖကျကို လကျနှဈဖကျနဲ့ ဆှဲထားပွီး လေးကိုငျးပုံသဏ်ဍာနျရှိပါစေ။ ခေါငျးကိုတညျ့မတျစှာထားဖို့ လိုပါတယျ။
ပွီးလြှငျအသကျကိုပွငျးပွငျးရှုပွီး ထိုနညျးအတိုငျး စက်ကနျ့ ၂၀ ကနေ ၆၀ အထိနပေေးပါ။
ကွမျးပွငျမှာ ဝမျးလြားမှောကျအနအေထားနဲ့ လကျတှကေိုအရှဖေ့ကျသို့ ဆနျ့ထုတျထားပေးပါ။ ပွီးလြှငျခန်ဓာကိုယျကိုအပျေါသို့ရသလောကျကိုငျးညှတျပွီး နဂိုပုံစံအတိုငျး ပွနျနပေါ။ အကွိမျ ၂၀- ၃၀ ကို ၃-၄ ကြော့ပွုလုပျပေးပါ။
ယခုလကေ့ငျြ့ခနျးကို ပွုလုပျဖို့အတှကျ ဟနျခကျြထိနျးတဲ့ဘောလုံးလိုအပျပါတယျ။ ပုံထဲက အနအေထားနဲ့ ခေါငျးကိုမတျမတျထားပွီး ခါးကိုအပျေါသို့ ကိုငျးညှတျရုံပါပဲ။ ၁၂-၁၅ကွိမျကို ၁ကြော့၂ ကြော့လောကျပွုလုပျပေးပါ။
ယခုလကေ့ငျြ့ခနျးကို စတငျဖို့အတှကျ ယခငျလကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို အနညျးဆုံးနှဈပတျလောကျပွုလုပျထားဖို့ လိုပါတယျ။ ကွမျးပွငျမှာ ဒူးထောငျလြှကျအနအေထားနဲ့ ပကျလကျအနအေထားအတိုငျးနပွေီး လကျနှဈဖကျကိုအနောကျသို့ ထောကျထားပါ။ ပွီးလြှငျ ဒူကိုမကှေးစပေဲ ခါးကိုအပျေါသို့မွှငျ့တငျပါ. ယခုပုံအတိုငျး ၃-၅စက်ကနျလောကျ နပေေးပါ။
Previous articleစိတ်ဆိုးရခက် ရိုက်ရခက်နဲ့ အိမ်မှာနေရင် မွှေတတ်တဲ့ ငမွှေထိုးလေးတွေရဲ့ ပုံရိပ်အချို့
Next articleဂွတီးဂွကျနိုင်လွန်းတဲ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ လန်းနေသူတွေ